PDF Expert 5, fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Raha te-hamaky sy hanao an-tsoratra ny fampahalalana ao amin'ny rakitra PDF ampiasanao amin'ny iPad sy iPhone ianao, dia angamba tsy misy fampiharana tsara kokoa hanaovana izany raha tsy amin'ny fampiharana PDF Expert 5. Ny farany farany amin'ny andiany fampiharana lava misy an-tsoratra PDF fitaovana. avy amin'ny mpamorona fanta-daza Readdle, Ny PDF Expert 5 dia rindrambaiko voaloa izay mazàna manana vidin'ny fividianana $ 9.99, saingy amin'ity herinandro ity dia maimaim-poana ao amin'ny App Store.
Raha te-hividy PDF Expert 5 ianao amin'ny fotoana rehetra, anio dia milaza aminao aho fa misy vaovao tena tsara, azo alaina maimaim-poana avy amin'ny App Store ny fampiharana, ao anatin'ny «la fampiharana maimaim-poana amin'ny herinandro»Ao amin'ny App Store.
Ny fampiroboroboana dia miaraka amin'ny fanavaozana lehibe ny fampiharana navoaka omaly, izay misy ny fijoroana ho an'ny iPad Pro. Ity fanavaozana ity dia manampy koa amin'ny alàlan'ny fampifanarahana iCloud, manampy ny asa eo am-pelatanana, sns. Tsy ilaina intsony ny milaza fa fotoana mety izao hisintonana ny PDF Expert 5 amin'ny fitaovanao.
Ho fanamarihana, Readdle koa dia namoaka PDF Expert ho an'ny Mac, izay midika fa ho afaka mampiditra fampahalalana mora foana ao amin'ny PDF ianao ary afaka mifamadika eo anelanelan'ny fitaovana misy anao sy ny iPad na ny iPhone.
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ny PDF Expert 5 dia:
Tsipika ambanin-tsoratra: Mariho ireo zavatra manan-danja ao amin'ny boky, magazine na antontan-taratasy tianao hojerena.
Fenoy ny endrika: Miaraha miasa amin'ny endrika PDF static noforonina tao amin'ny Adobe Acrobat.
Mamorona naoty: Manampia fanehoan-kevitra amin'ireo lahatsoratra vakianao.
Manaova sary amin'ny rantsan-tànanao: Mampiasà mamorona naoty an-tanana na manisy marika an-tsoratra amin'ny boky scan.
Mamorona tsoratadidy: Mamorona tabilao atiny ho an'ny antontan-taratasinao avy amin'ny iPad sy iPhone.
Famerenana ireo antontan-taratasy: Asio marika ireo lesoka ary hamafiso ireo andianteny lehibe.
Antontan-taratasy: Mampiasà sonia nomerika hanasonia fifanarahana sy fifanarahana eny an-dalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » PDF Expert 5, fampiharana maimaim-poana mandritra ny herinandro ao amin'ny App Store
Lahatsary 360º avy amin'ny Facebook dia tonga amin'ny fampiharana ho an'ny iOS